စိတ်လှုပ်ရှားလို့ ချွေးထွက်တာကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့ – Gentleman Magazine
စိတ်လှုပ်ရှားလို့ ချွေးထွက်တာကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့
စိတျလှုပျရှားလို့ ခြှေးထှကျတာကို အဆုံးသတျလိုကျပါတော့
လူသားတွေ ချွေးထွက်တတ်ကြတာ အများအားဖြင့်ကအပူကြောင့်ပါ။ သင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးတဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟူတ် ပူတဲ့နေ့တွေကြောင့်ပါ။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ Boss က သင့်ကို ဆူတဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတ် ကောင်မလေးကို ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဖို့ စောင့်နေရတုန်းမှာ လက်မှာချွေးတွေ စို့လာတာကတော့ စိတ်လှုပ်ရှားလို့ ချွေးထွက်တာပါ။
Gym တွေမှာဆို ချွေးထွက်တာက သင် ဘယ်လောက် အလုပ် ကြိုးစားပြီးပြီလဲဆိုတာ ပြတာပါ။ ဂုဏ်ယူစရာ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နာရီလောက် ပြင်းပြင်းထန်ထန် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိုက်ရင် ချွေး တစ်လီတာခွဲလောက် ထွက်ပါတယ်။ တစ်လီတာ ရေသန့်ဘူး တစ်ဘူးနဲ့ တစ်ဝက်ပါ။
ဒါပေမယ့် စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ချွေးထွက်တာကတော့ ဂုဏ်ယူစရာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါမျိုး ဖြစ်မှာကို ကျွန်တော်တို့ အရမ်းစိုးရိမ်ကြပါတယ်။ ယောက်ျား အယောက် ၈၀၀ လောက်ကို စစ်တမ်းကောက်ကြည့်တာ ၇၃ ရာနှုန်းက သူတို့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ထွက်တဲ့ချွေးပိုပြီး အထွက်နည်းချင်ကြပါတယ်။ မိန်းမ ၉၇၀ ယောက်ကို စစ်တမ်းလုပ်ရာမှာလဲ ၈၄ ရာနှုန်းက ယောက်ျားတစ်ယောက် သူတို့နဲ့ Date လုပ်နေတုန်း ချွေးထွက်လာရင် အရမ်း စိတ်ညစ်ကြပါတယ် တဲ့။
စိတ်ထဲက မပါပဲ ချွေးထွက်ခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်က သင့်ကို သစ္စာဖောက်တာနဲ့ တူတူပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်ဘာသာ ယုံကြည်မှု ရှိပုံ ပေါက်ဖို့ ကြိုးစားကြပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်က ” ငါရူးနေပြီ!!!!” လို့ အော်ပြောနေတာနဲ့ တူတူပါပဲ။
ချွေးထွက်နည်းဖို့ ပထမခြေလှမ်းကတော့ ချွေးထွက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို သိဖို့ပါပဲ။
စိတ်လှုပ်ရှားရင် ချွေးထွက်ရတာဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူသားမျိုးရိုးဗီဇကြောင့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အရေပြားက Fight or Flight အခြေအနေမျိုးမှာ ချောမွတ်နေရင် သားရဲတွေ မိမိရရ ဆုပ်ကိုင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နို့တိုက်သတ္တဝါ အများစုဟာ ခြေဖဝါး၊ လက်ဖဝါးမှာ ချွေးဂလင်းလေးတွေ ပါပါတယ်။ စိုနေတဲ့ လက်ဖဝါး၊ ခြေဖဝါးတွေဟာ သင့်ကို သစ်ပင်၊ ကုန်းမြင့်ပေါ်ကို ပိုပြီးလွယ်လွယ်ပြေးတက်ဖို့ လေစုပ်ခွက် သေးသေးလေးတွေလို အထောက်အကူ ပေးမှာပါ။ စိုနေတဲ့ လက်ချောင်းတွေက စာအုပ်လှန်ဖို့ ပိုပြီးလွယ်သလိုပါပဲ။
ချွေးမှာ ပုံမှန်ဆိုရင် အနံ့မရှိပါဘူး။ အရေပြားပေါ်က ဗက်တီးရီးယားတွေနဲ့ ဓာတ်ပြုလို့သာ သင့်ရဲ့ ကိုယ်နံ့ ဖြစ်တဲ့ ချွေးနံ့ ထွက်လာရတာပါ။ အန္တရာယ် တစ်ခုခုကြုံနေရရင် ချွေးနံ့က ပြောင်းလဲသွားတတ်ပါတယ်။ နေမကောင်းရင်လဲ ချွေးနံ့ပြောင်းတတ်ပါတယ်။ အရင် ကျောက်ခေတ်တုန်းကတော့ ဒီအနံ့ပြောင်းလဲခြင်းတွေဟာ လူသားမျိုးနွယ် ပျံ့ပွားအောင် ကူညီပေးခဲ့ပုံ ရပါတယ်။ နေမကောင်းသူနား အနားမကပ်တာတို့၊ အန္တရာယ်လာရင် သိပြီးတူတူပြေးတာမျိုးပါ။
ချွေးနံ့ နည်းနည်းထွက်နေတာက ယောက်ျားပီသကြောင်း ပြနေရာလဲ ရောက်ခဲ့ပုံ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခု ခေတ်ကတော့ မတူတော့ပါဘူး။ အဲဒိမှာ အကွက်မြင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ချို့က ချွေးနံ့ပျောက်ဆေးတွေ စတင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။
ချွေးမထွက်အောင် ကိုယ့်ဘာသာ စိတ်ထိန်းခြင်းဟာ အကောင်းဆုံး ချွေးနံပျောက်ဆေးတွေထက် ပိုအစွမ်းထွက်ဆဲပါ။ ဒါပေမယ့် စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ချွေးထွက်တာကို အရမ်းကာကွယ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ချွေးထွက်တာကို တန်ပြန်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက စိတ်မလှုပ်ရှားအောင် ထိန်းဖို့ပါပဲ။ လူတွေဟာ အဆိုးဘက်ကို အကြီးချဲ့ စဉ်းစားတတ်ပါတယ်။ အဲဒိလို မစဉ်းစားမိဖို့ ထိန်းပါ။ ခေါင်းအေးအေးထားပါ။ ချက်ခြင်းတော့ မရပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။
ချွေးအရမ်းထိန်းမရအောင် ထွက်နေရင်တော့ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။
Drysol လိုမျိူး ချွေးထွက်နည်းစေတဲ့ ဆား သုံးဆနဲ့ အနံ့ပျောက်ဆေးတွေ ပေါင်းထားတာမျိုးက အဆင်အပြေဆုံးပါ။
သင့်ရဲ့ လက်၊ ဒါမှမဟုတ် ခြေထောက်ကို လျှပ်စစ် ပျော့ပျော့လေး ဖြတ်စီးနေတဲ့ ရေဇလုံထဲ နှစ်ထားခိုင်းတဲ့ ကုထုံးတစ်မျိုးပါ။
အရေးအကြောင်းပျောက်စေတဲ့ အဆိပ်ထိုးဆေးတွေဟာ ချွေးထွက်စေတဲ့ အာရုံကြောတွေကိုလဲ ထုံသွားအောင် တတ်နိုင်ပါတယ်။ လေးလခွဲလောက်တော့ ခံပါတယ်။
Anticholinergics လို့ခေါ်တဲ့ ချွေးထွက်မှုကို တားဆီးပေးတဲ့ ဆေးတွေလဲ ရှိပါတယ်။ Side Effect တွေတော့ ရှိပါတယ်။
လူသားတှေ ခြှေးထှကျတတျကွတာ အမြားအားဖွငျ့ကအပူကွောငျ့ပါ။ သငျ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပွီးတဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟူတျ ပူတဲ့နတှေ့ကွေောငျ့ပါ။ ဒါပမေယျ့ သငျ့ရဲ့ Boss က သငျ့ကို ဆူတဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတျ ကောငျမလေးကို ပထမဆုံးအကွိမျတှဖေို့ စောငျ့နရေတုနျးမှာ လကျမှာခြှေးတှေ စို့လာတာကတော့ စိတျလှုပျရှားလို့ ခြှေးထှကျတာပါ။
Gym တှမှောဆို ခြှေးထှကျတာက သငျ ဘယျလောကျ အလုပျ ကွိုးစားပွီးပွီလဲဆိုတာ ပွတာပါ။ ဂုဏျယူစရာ တဈခု ဖွဈပါတယျ။ တဈနာရီလောကျ ပွငျးပွငျးထနျထနျ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျလိုကျရငျ ခြှေး တဈလီတာခှဲလောကျ ထှကျပါတယျ။ တဈလီတာ ရသေနျ့ဘူး တဈဘူးနဲ့ တဈဝကျပါ။
ဒါပမေယျ့ စိတျလှုပျရှားမှုကွောငျ့ ခြှေးထှကျတာကတော့ ဂုဏျယူစရာ မဟုတျပါဘူး။ အဲဒါမြိုး ဖွဈမှာကို ကြှနျတျောတို့ အရမျးစိုးရိမျကွပါတယျ။ ယောကျြား အယောကျ ၈၀၀ လောကျကို စဈတမျးကောကျကွညျ့တာ ၇၃ ရာနှုနျးက သူတို့ စိတျလှုပျရှားမှုကွောငျ့ ထှကျတဲ့ခြှေးပိုပွီး အထှကျနညျးခငျြကွပါတယျ။ မိနျးမ ၉၇၀ ယောကျကို စဈတမျးလုပျရာမှာလဲ ၈၄ ရာနှုနျးက ယောကျြားတဈယောကျ သူတို့နဲ့ Date လုပျနတေုနျး ခြှေးထှကျလာရငျ အရမျး စိတျညဈကွပါတယျ တဲ့။
စိတျထဲက မပါပဲ ခြှေးထှကျခွငျးဟာ ခန်ဓာကိုယျက သငျ့ကို သစ်စာဖောကျတာနဲ့ တူတူပါပဲ။ ကြှနျတျောတို့ဟာ ကိုယျ့ဘာသာ ယုံကွညျမှု ရှိပုံ ပေါကျဖို့ ကွိုးစားကွပမေယျ့ ခန်ဓာကိုယျက ” ငါရူးနပွေီ!!!!” လို့ အျောပွောနတောနဲ့ တူတူပါပဲ။
ခြှေးထှကျနညျးဖို့ ပထမခွလှေမျးကတော့ ခြှေးထှကျရတဲ့ အကွောငျးရငျးကို သိဖို့ပါပဲ။
စိတျလှုပျရှားရငျ ခြှေးထှကျရတာဟာ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ လူသားမြိုးရိုးဗီဇကွောငျ့ပါ။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အရပွေားက Fight or Flight အခွအေနမြေိုးမှာ ခြောမှတျနရေငျ သားရဲတှေ မိမိရရ ဆုပျကိုငျနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ နို့တိုကျသတ်တဝါ အမြားစုဟာ ခွဖေဝါး၊ လကျဖဝါးမှာ ခြှေးဂလငျးလေးတှေ ပါပါတယျ။ စိုနတေဲ့ လကျဖဝါး၊ ခွဖေဝါးတှဟော သငျ့ကို သဈပငျ၊ ကုနျးမွငျ့ပျေါကို ပိုပွီးလှယျလှယျပွေးတကျဖို့ လစေုပျခှကျ သေးသေးလေးတှလေို အထောကျအကူ ပေးမှာပါ။ စိုနတေဲ့ လကျခြောငျးတှကေ စာအုပျလှနျဖို့ ပိုပွီးလှယျသလိုပါပဲ။
ခြှေးမှာ ပုံမှနျဆိုရငျ အနံ့မရှိပါဘူး။ အရပွေားပျေါက ဗကျတီးရီးယားတှနေဲ့ ဓာတျပွုလို့သာ သငျ့ရဲ့ ကိုယျနံ့ ဖွဈတဲ့ ခြှေးနံ့ ထှကျလာရတာပါ။ အန်တရာယျ တဈခုခုကွုံနရေရငျ ခြှေးနံ့က ပွောငျးလဲသှားတတျပါတယျ။ နမေကောငျးရငျလဲ ခြှေးနံ့ပွောငျးတတျပါတယျ။ အရငျ ကြောကျခတျေတုနျးကတော့ ဒီအနံ့ပွောငျးလဲခွငျးတှဟော လူသားမြိုးနှယျ ပြံ့ပှားအောငျ ကူညီပေးခဲ့ပုံ ရပါတယျ။ နမေကောငျးသူနား အနားမကပျတာတို့၊ အန်တရာယျလာရငျ သိပွီးတူတူပွေးတာမြိုးပါ။
ခြှေးနံ့ နညျးနညျးထှကျနတောက ယောကျြားပီသကွောငျး ပွနရောလဲ ရောကျခဲ့ပုံ ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ခု ခတျေကတော့ မတူတော့ပါဘူး။ အဲဒိမှာ အကှကျမွငျတဲ့ ကုမ်ပဏီတဈခြို့က ခြှေးနံ့ပြောကျဆေးတှေ စတငျထုတျလုပျရောငျးခခြဲ့ပါတယျ။
ခြှေးမထှကျအောငျ ကိုယျ့ဘာသာ စိတျထိနျးခွငျးဟာ အကောငျးဆုံး ခြှေးနံပြောကျဆေးတှထေကျ ပိုအစှမျးထှကျဆဲပါ။ ဒါပမေယျ့ စိတျလှုပျရှားမှုကွောငျ့ ခြှေးထှကျတာကို အရမျးကာကှယျနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။
စိတျလှုပျရှားမှုကွောငျ့ ခြှေးထှကျတာကို တနျပွနျဖို့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးက စိတျမလှုပျရှားအောငျ ထိနျးဖို့ပါပဲ။ လူတှဟော အဆိုးဘကျကို အကွီးခြဲ့ စဉျးစားတတျပါတယျ။ အဲဒိလို မစဉျးစားမိဖို့ ထိနျးပါ။ ခေါငျးအေးအေးထားပါ။ ခကျြခွငျးတော့ မရပမေယျ့ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ အဆငျပွသှေားပါလိမျ့မယျ။
ခြှေးအရမျးထိနျးမရအောငျ ထှကျနရေငျတော့ အောကျပါနညျးလမျးတှကေို စဉျးစားကွညျ့ပါ။
Drysol လိုမြိူး ခြှေးထှကျနညျးစတေဲ့ ဆား သုံးဆနဲ့ အနံ့ပြောကျဆေးတှေ ပေါငျးထားတာမြိုးက အဆငျအပွဆေုံးပါ။
သငျ့ရဲ့ လကျ၊ ဒါမှမဟုတျ ခွထေောကျကို လြှပျစဈ ပြော့ပြော့လေး ဖွတျစီးနတေဲ့ ရဇေလုံထဲ နှဈထားခိုငျးတဲ့ ကုထုံးတဈမြိုးပါ။
အရေးအကွောငျးပြောကျစတေဲ့ အဆိပျထိုးဆေးတှဟော ခြှေးထှကျစတေဲ့ အာရုံကွောတှကေိုလဲ ထုံသှားအောငျ တတျနိုငျပါတယျ။ လေးလခှဲလောကျတော့ ခံပါတယျ။
Anticholinergics လို့ချေါတဲ့ ခြှေးထှကျမှုကို တားဆီးပေးတဲ့ ဆေးတှလေဲ ရှိပါတယျ။ Side Effect တှတေော့ ရှိပါတယျ။
Previous: သင့်ကို လူတွေ ချက်ချင်း စိတ်ပျက်သွားစေနိုင်သည့် အချက်(၉)ခု
Next: အောင်မြင်မှုနဲ့ လမ်းလွဲစေမည့် ဆုံးဖြတ်ပုံအလွဲများ